Imidlalo engcono kakhulu yezithuthuthu ye-PC | Izindaba zamagajethi
Imidlalo engcono kakhulu yezithuthuthu ye-PC
UPaco L Gutierrez | 27/03/2021 18:30 | General, Imidlalo yevidiyo
Imidlalo yamavidiyo wezimoto ngokungangabazeki ithandwa kakhulu phakathi kwejubane ne-adrenaline ngokweqile, phakathi kwemidlalo edlalwa kakhulu ehlala inesimo semoto imidlalo yevidiyo, kepha kuthiwani uma esikufunayo kungukuthulula konke ukungezwani kwethu ngemuva kwesithuthuthu? Sinezinketho ezahlukahlukene lapho sikhetha ukuthi imuphi umdlalo esizodlala nawo, kepha ngokusobala siphansi kukhathalogi esiyithola ngokwemidlalo yamahhashi yemoto.
Sinezinhlobonhlobo phakathi kwezibonelo ezimbalwa ezikhona, ngoba sinezifanisi zompetha bomhlaba wezithuthuthu, siye kwi-motocross, lapho kuvela khona ukweqa okukhulu nezikhafu odakeni. Kulokhu, i-peripheral ekhethelwe ukudlala isilawuli kude, ngoba isondo lokushayela belingeke likulungele kakhulu ukushayela isithuthuthu, futhi kunzima ukuthola okufana nesithuthuthu esine-swingarm sokusetshenziswa kwasekhaya. Kulesi sihloko sizoxoxa ngemininingwane okungcono kakhulu imidlalo yezithuthuthu ye-PC.
1.1 Imodi eku-inthanethi
2.1 Imodi eku-inthanethi
3.1 Imodi eku-inthanethi
4.1 Imodi eku-inthanethi
Lesi yisimulator sesithuthuthu esisuselwa kwiMotoGP World Championship, enezimpawu ezifanayo zezintaba esizibona ebugebengwini bangempela nabagibeli abafanayo, njengoba kuyisiga saminyaka yonke kuyaqhubeka phakathi kwezinguqulo, ngakho-ke sikhetha uhlobo khetha i-gameplay izofana kakhulu. Vele, kuyakhombisa ukuthi isitudiyo siyabalalela abalandeli baso, ngakho-ke sizobona amaphutha amaningi alungisiwe abonwe kwizitolimende ezedlule, ngokungeziwe ekubukekeni kwezithombe okuvuselelwe.
Yize kusobala, impahla ebaluleke kakhulu yalo mdlalo wevidiyo ukuthi konke okuqukethwe kwayo okubonakalayo kusemthethweni, ngenxa yelayisense yeNdebe Yomhlaba wonke, sizoba namaqembu angempela, abashayeli bezindiza, izithuthuthu namasekethe. Lokhu akukona okwenzelwe umhlaba kuphela isigaba sikaNdunankulu, futhi sinakho konke esikubonayo ku-Moto2, Moto3 naku-500cc imivimbo emibili kanye ne-MotoGP yomlando ukushaya okune noma imodi entsha ye-MotoE.
Siphinde siqokomise imodi ephelele yomsebenzi esivumela ukuthi sisayine iqembu langempela noma sizakhele eyethu. Esikhundleni sokuba izinhlanga ezilandelanayo ngaphandle kokukhuthaza, ngaphezu kokuncintisana, kufanele siphathe imikhakha eyahlukahlukene yomsebenzi wethu wobuchwepheshe njengabashayeli bezindiza, kufaka phakathi abaxhasi, ukusayina abasebenzi noma ukuguqula intaba yethu.
Sinemodi eku-inthanethi yabadlali abayishumi nambili ehlanganisiwe futhi ingajatshulelwa ngezindlela ezahlukahlukene, njenge aphikisana nemincintiswano yomphakathi neyangasese noma aze akhethe ukuncintisana ngesizini entsha ye-eSport. Konke lokhu ngamaseva azinikele aqinisekisa isimo esifanele sokudlala ngaphandle kokulahla. Lo mdlalo wevidiyo uvuselelwa ngokuqhubekayo ngabathuthukisi bawo ngakho-ke uyathuthukiswa ngezimagqabhagqabha ngayinye.
Umdlalo weMotocross ogcine ukubonile ukukhanya naphezu kwesifo esiwubhadane, umdlalo ugcina zonke izimfanelo zalowo owandulelayo kodwa uthuthuka kakhulu esigabeni esinemifanekiso. Kungumdlalo wokuqala lapho singadlala khona njengoJorge Prado, umshayeli wezindiza waseGalician omele iSpain kulo mdlalo. Umsindo we-Ambient uhamba igxathu elilodwa uphinde ubuyise umsindo wezithuthuthu kunanini ngaphambili njengamazwi nesikhuthazo somphakathi kubashayeli bezindiza.
Kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, lo mdlalo ufaka amasekethe ayi-19 akha isizini ka-2020 ngemuva kokufaka uLommel noXanadu ngokuningiliziwe. Sinazo Abagibeli abangama-68 bezigaba ezihlukene, kusuka ku-250cc kuya ku-450cc kanye nezinto ezingaphezu kuka-10.000 ezisemthethweni ukwenza ngezifiso zonke izinto zobuhle nokusebenza kwesithuthuthu sethu.
Akukude kakhulu maqondana nezindlela zemidlalo kufaka phakathi ezakudala Umsebenzi, iGrand Prix, Ukulingwa Kwesikhathi kanye neChampionship. Emzileni we-trajectory inhloso yethu kuzoba ukuqala kusuka kwehle kakhulu nomshayeli wethu wendiza esizokwenza ngendlela oyithandayo futhi sizothola ulwazi nabaxhasi ukukhuphukela phezulu.
Imodi yabadlali abaningi ibingalahlekile, ithuthukisa kakhulu lesi sigaba kufaka phakathi ekugcineni i- amaseva azinikele. Lokhu kuvumela imidlalo enamanzi amaningi ngaphandle kokusalela okusabekayo okuchitha umjaho. Siphinde sibe nemodi yoMqondisi Womjaho ukudala eyethu imiqhudelwano futhi siyisakaze bukhoma ngokunikeza amakhamera.
I-Saga yabadali be-MotoGP enikeza umbono ohlukile wokuthi kuyini umjaho wesithuthuthu, ukudonsela umbono ongathi shu. Ake sithi kungukubuka izithuthuthu okuhle kakhulu, kubhejwa ekulingiseni kusetshenziswa cishe noma isiphi isithuthuthu sasemgwaqweni esingasicabanga.
Esigabeni sayo sesine sithola ifayela le- ukulungiswa kabusha kwemidwebo eza ukugcwalisa isizukulwane esilandelayo sePS5 kanye nochungechunge lweChungechunge X kanye nama-PC anamandla kakhulu. Ngokokuqala ngqá sizobona isimo sezulu esilindelekile esilindelekile, esizosivumela ukuthi siqale umdlalo ngezulu eliguqubele bese siwuqeda unethe kakhulu. Umjikelezo wobusuku nemini nawo ufakiwe ukuze sikwazi ukuqala imijaho ntambama siyiphothule kusihlwa.
Izindlela zemidlalo azihluki kakhulu ngalowo owandulelayo futhi ngukuthi siqala ngemodi yokusebenza lapho ukukhetha kwethu okokuqala kuyiligi yesifunda lapho sihlose ukuqala khona njengompetha. Ngokuya ngokuthi sikhetha ini, sizogijimela kwelinye noma kwezinye izifunda lapho kuzodingeka ukuthi sidlule izivivinyo ezahlukahlukene ukuze sikhuphukele. Umdlalo ufuna ngokudlala futhi unikeza ubuqiniso obuningi kepha futhi nobunzima obukhulu kakhulu uma sifuna ukusingatha intaba ngejubane eligcwele.
Sinegaraji nemali esingayithola njengoba siqhubekela phambili emdlalweni, inhloso yethu kuzoba ukugcwalisa leli galaji ngezithuthuthu zabo bonke abantu abasuka kwenye indawo futhi uzithuthukise kakhulu. Njengoba siqhubekela phambili kulo mdlalo sizozakhela igama futhi lokhu kuzosinikeza ithuba lokugxumela kwiligi yomhlaba nakuSuperBikes emhlabeni.
Ikhathalogi yezithuthuthu ifinyelela inani le- AmaMoor asemthethweni angama-175 avela kubakhiqizi abahlukene abangama-22, kusukela ngo-1966 kuze kube manje. Ngakolunye uhlangothi sithola ukushaywa Amasekhethi wangempela angama-30, iphinde yakhathala. Isigaba sokuqhafaza sinakekelwe ngokukhulu ukucophelela, ngokubala ukuskena kwe-laser eyi-3d kuzo zombili izintaba nabashayeli bezindiza. Ukugqwayiza kwabagibeli nezithuthuthu ezihambayo kungokoqobo, okwenza kucace isikhathi nokunakekelwa okunikelwe esigabeni esibukwayo.
Umdlalo unemodi elula eku-inthanethi enezindlela ezimbalwa zomdlalo, kepha kuzoba ukuhlolwa okunzima kwe-litmus ukukhombisa ukuthi ngubani umshayeli ongcono kunabo bonke emijahweni enabadlali abangafika kwabayi-12 emhlabeni jikelele. Inombolo enkulu yamamodi ayikho, kanye nemodi yabadlali abaningi bendawo yokuhlukanisa isikrini.
Okufanele kwaziswe ukuthi sinamaseva azinikele, ngakho-ke uketshezi nekhwalithi yemidlalo kuzoba kahle. Ngokuvamile umdlali wabadlali abaningi muhle futhi usebenza kahle, yize sishiywa sinambitheka kamnandi uma sicabangela ubukhulu besihloko nokunakekelwa okunikezwe ezinye izingxenye.
Umdlalo we-quintessential motocross oxhaswe ngumkhiqizo we-Monster weziphuzo lapho sithola khona abagibeli, amasekethe namaqembu asemthethweni obuqhawe baseMelika. Okuthile okugqamile phakathi kwakho konke okunye yizinga eliphakeme lokwenza ngokwezifiso esikuthola kulesi sihloko. Singakhetha phakathi kwemiklamo ehlukene, izinhlobo, imibala yezigqoko zokuzivikela, izingilazi, amabhuzu, izivikeli, izitika ... Lapho uchungechunge lomhlanga seluphelile, sizosebenzela enjongweni yethu yokufinyelela phezulu.
Sibhekene nomdlalo ngaphandle kokuba yi-simulator emsulwa, akuyona i-arcade ephelele, ngakho-ke ukulandela okokufundisa ngokucophelela kuzosisiza kakhulu lapho ushayela. Ayikho imodi yobunzima, ngakho-ke ijika lobunzima lizoqhubeka, kusukela ekuqaleni akulula ukunqoba umjaho, kodwa izinto zizoba zimbi njengoba siya phambili. Futhi ngeke kube lula ukugcina ibhayisikili limile, ngakho-ke kuzojwayeleka kakhulu ukuthi sishaye phansi ngokubala okuncane.
Sinemodi ebizwa nge-Complex, lapho sithola khona izingqimba zomhlaba ezisuselwe eziqhingini zaseMaine, lapho sizojabulela khona amakhilomitha wokushayela mahhala ukuhlola amakhono ethu. Siphinde sibe namasekhethi e-SuperCross nenye ye-MotoCross lapho ungabamba iqhaza khona nabangani.
Isigaba sokuqhafaza sincike kwi-PC esinayo, kepha uma sinomshini omuhle, sizojabulela izinhlanga eziwuketshezi ngemidwebo ehloniphekile, ukwakheka nezikhathi zokulayisha zithuthukisiwe. Ukukhulunywa okukhethekile ku-physics yezithuthuthu futhi ikakhulukazi ithrekhi. Amanye amasekethe anezindawo ezinodaka, lapho amabhayisikili ethu ezoshiya khona amathrekhi abo futhi bashibilike beconsa udaka. Imidwebo ihambisana nengoma emnandi, egqamisa idwala nomsindo ovala izindlebe wamapayipi e-exhaust.
Yilapho singathola khona izindaba ezingatheni, ngoba le modi yabadlali abaningi ayishintshi kakhulu uma iqhathaniswa neyandulelayo, kepha singajabulela imijaho enabadlali abangafika kwabangu-22. Umdlalo unamaseva azinikele azogwema ukubhekana nokulahleka okungalindelekile noma ukuphuma ngaphandle uma ukuxhumana kwethu kukuvumela. Singahlela ubumpetha phakathi komphakathi ngemodi yoMqondisi Womjaho, lapho sizoba ngabahleli khona futhi singasakaza ubuqhawe obuphezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Imidlalo engcono kakhulu yezithuthuthu ye-PC